Saxiixa xilli ciyaareedka Martinez oo mar kale iftiimayey Aston Villa.
Home Horyaalka Ingiriiska Saxiixa xilli ciyaareedka Martinez oo mar kale iftiimayey Aston Villa.
Gool hayihii hore ee kooxda arsenal Martinez ayaa ku jiro waqti qurux badan ku qaadanaya kooxda Aston Vilsa isagoo loo arko Saxiixa xilli ciyaareedka kaas ooo mar kale u iftiimiyey Aston Villa
Emiliano Martinez ayaa ku dhawaad hal gacan gacanta ku haysay Aston Villa sabtidii isagoo sameeyay sagaal badbaadin barbaro goolal la’aan ah oo ay la galeen kooxda Brighton kulan qeyb ka ah premier league.
Martinez ayaa ka dhaqaaqay Arsenal kuna biiray Aston Villa lacago gaarayey 20 milyan ginni ($ 26.2m) xagaagii waana tan iyo markii uu ku jiray qaab nololeedkiisa isagoo soo jeedinaya in kooxdiisii hore laga yaabo inay si fudud u fasaxday inkasta oo uu jiro gooldhaliyaha ugu horeeya ee laga doortay. Bernd Leno.
Goolhayaha Villa ayaa shabaqa soo taabtay seddex ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeysay – oo uu ku jiro mid ka mid ah Gunners – si uu uga caawiyo kooxdiisa kaalinta sideedaad ee Premier League. Waxa uu sameeyey 12 go’yaal nadiif ah shabaqiisa xilli ciyaareedka.
Previous articleLionel messi oo dhigay Rikoor cusub kadib safashadiisii Kulankii xalay.
Next articleWeeraryahankii hore Chelsea & Milan Pato oo heshiis la galay kooxda Orlando City.